Zinedine Zidane oo Record layaab leh u dhigay Real Madrid? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Zinedine Zidane oo Record layaab leh u dhigay Real Madrid?
(02-09-2017) Macalinka kooxda kubada Cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa Record layaab leh u dhigay Naadigiisa kadib markii uu Macalinkaas Noqdey kii ugu qarashaka yaraa ee soo mara kooxdaas inta uu Madaxweynaha ka yahay Florentino Perez.
Zinedine Zidane ayaan lasoo Wareegin Cayaartoy waa weyn oo lacag badan ku fadhisa iyada oo Real Madrid ay caado u ahayd in ay lacagta ugu badan ku soo qaataan Xiddigo waa weyn oo u dheela kooxdaas.
Florentino Perez oo hada 70 Sano jir ah isla Markaana in badan madaxweyne ka ahaa Naadigaas ayaa Macalimiintii soo maray Real Madrid waxa ay qarasha gareeyeen lacag aad u badan sida Vicente del Bosque oo qarasha gareeyey 200 million euros Xili Cayaareedkii 2001-2002.
Sidoo kale Macalin Carlo Ancelotti ayaa qarasha gareeyey aduun lacageed gaaraya 290m euros kadib markii uu soo qaatay Cayaartoy ay ka midyihiin James Rodriguez iyo Gareth Bale,sidoo kale Jose Mourinho ayaa qarasha gareeyey intii uu Joogey Real Madrid 128m euros.
Hadaba Macalin Zinedine Zidane oo Xili Cayaareedkii 3 aad Hogaaminaya Real Madrid ayaa qarasha gareeyey ilaa hada 82.5m euros lacagtaas oo uu kula soo wareegay 4m euros Marco Asensio, 26m euros Theo Hernandez, 30m euros on Alvaro Morata, 16.5m euros on Dani Ceballos, and 6m euros on Jesus Vallejo sidaa ayuuna ku dhigay Record Cusub maadaama uu Noqdey Macalinkii ugu qarashka yaraa ee soo mara kooxdaan intii uu Madaxweynaha ka ahaa Florentino Perez.